‘Sɛ Mode Mo Adwene Si Honhom Mu Nneɛma So a Mubenya Nkwa ne Asomdwoe’ | Adesua
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Wɔn a wɔnam honhom mu no de wɔn adwene si honhom mu nneɛma so.”​—ROM. 8:5.
NNWOM: 57, 52
Ɛmfa ho anidaso a yɛwɔ no, adɛn nti na sɛ yesusuw Romafo ti 8 no ho a, yebenya mfaso?
Ɔkwan bɛn so na Kristoni betumi afi ase de ‘n’adwene asi honam nneɛma so’?
Sɛ wɔka sɛ yɛmfa yɛn adwene nsi honhom mu nneɛma so a, dɛn na ɛhwehwɛ sɛ yɛyɛ?
1, 2. Adɛn nti na Romafo ti 8 ho hia Kristofo a wɔasra wɔn no paa?
WOAKENKAN Romafo 8:15-17 bere a yɛrekae Yesu wu no pɛn? Ebia woakenkan pɛn. Saa kyerɛw nsɛm no kyerɛkyerɛ ɔkwan a Kristofo fa so hu sɛ wɔasra wɔn no mu. Ɛka sɛ, honhom kronkron ne wɔn honhom di adanse. Romafo 8:1 nso ka “wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu” ho asɛm. Enti, Romafo ti 8 fa wɔn a wɔasra wɔn no nkutoo ho anaa? Saa asɛm no fa Kristofo a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no nso ho anaa?
2 Kristofo a wɔasra wɔn no titiriw na asɛm a ɛwɔ Romafo ti 8 no fa wɔn ho. Wonya “honhom no” sɛ nnipa a ‘wɔretwɛn sɛ wobegye wɔn ayɛ mma, ogye a wobegye wɔn afi wɔn honam nipadua mu no.’ (Rom. 8:23) Nokwasɛm ne sɛ, wɔhwɛ kwan sɛ daakye wɔbɛyɛ Onyankopɔn mma wɔ soro. Nea ɛbɛma ayɛ yiye ne sɛ, wɔbɔɔ wɔn asu ma wɔbɛyɛɛ Kristofo, na Onyankopɔn de agyede no yɛɛ wɔn ho adwuma. Ɔde wɔn bɔne firii wɔn, na obuu wɔn bem sɛ ne honhom mu mma.​—Rom. 3:23-26; 4:25; 8:30.
3. Yɛyɛ dɛn hu sɛ Romafo ti 8 fa wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no nso ho?
3 Romafo ti 8 fa wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no nso ho, efisɛ ɔkwan bi so no, Onyankopɔn bu wɔn nso sɛ wɔyɛ treneefo. Yehu wei wɔ asɛm a Paulo dii kan kyerɛwee wɔ ne krataa a ɔde kɔmaa Romafo no mu. Ɔkaa Abraham ho asɛm wɔ ti 4 no mu. Ɔbarima a ɔwɔ gyidi yi tenaa ase ansa na Yehowa de Mose Mmara no rema Israel man no, na saa ara na ɔtenaa ase bere tenteenten ansa na Yesu rebewu ama yɛn bɔne. Nanso, Yehowa hui sɛ Abraham gyidi yɛ den paa, enti obuu Abraham sɛ ɔtreneeni. (Kenkan Romafo 4:20-22.) Saa ara na Yehowa betumi abu Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ a wodi nokware na wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so daa no sɛ treneefo. Wei nti, wobetumi anya afotu a Romafo ti 8 de ma treneefo no so mfaso.
4. Asɛm bɛn na ɛsɛ sɛ Romafo 8:21 ka yɛn ma yesusuw ho?
4 Romafo 8:21 ma yehu pefee sɛ, ɔkwan biara so wiase foforo no bɛba. Saa kyerɛwsɛm no hyɛ bɔ sɛ, “abɔde no ankasa nso benya ahofadi afi ɔporɔw nkoasom mu akɔ Onyankopɔn mma anuonyam ahofadi mu.” Nea ɛsɛ sɛ yedwen ho ne sɛnea yebetumi akɔ hɔ bi, ne nea yɛyɛ a yɛn nsa bɛka saa akatua no bi. Wugye di sɛ wobɛkɔ wiase foforo no mu bi anaa? Romafo ti 8 ma yɛn afotu a ebetumi aboa wo ma woakɔ hɔ bi.
“ADWENE A ESI HONAM NNEƐMA SO”
5. Asɛm a ɛho hia bɛn na Paulo kaa ho asɛm wɔ Romafo 8:4-13?
5 Kenkan Romafo 8:4-13. Romafo ti 8 ka ebinom a wɔnantew “ɔhonam mu” ho asɛm, na ɛkyerɛ nsonsonoe a ɛwɔ wɔne wɔn a wɔnantew “honhom mu” no ntam. Ebinom betumi anya adwene sɛ, na Paulo reka wɔn a wonni nokware no mu ne wɔn a wɔwom, kyerɛ sɛ, wɔn a wɔnyɛ Kristofo ne wɔn a wɔyɛ Kristofo ho asɛm. Nanso, Paulo kyerɛw saa asɛm no kɔmaa “Onyankopɔn adɔfo a wɔwɔ Roma a wɔafrɛ wɔn abɛyɛ akronkronfo nyinaa.” (Rom. 1:7) Enti, nsonsonoe a na ɛwɔ Kristofo a wɔnantew ɔhonam mu ne Kristofo a wɔnantew honhom mu ho asɛm na na Paulo reka. Nsonsonoe bɛn na na ɛda wɔn ntam?
6, 7. (a) Sɛ Bible de asɛmfua “ɔhonam” di dwuma a, ɛtɔ da a, ɛkyerɛ sɛn? (b) Ɔkwan bɛn so na Paulo de asɛmfua “ɔhonam” dii dwuma wɔ Romafo 8:4-13?
6 Momma yenni kan nhwɛ asɛmfua “ɔhonam.” Bere a Paulo de asɛmfua “ɔhonam” dii dwuma no, dɛn na na ɔrekyerɛ? Bible de asɛmfua “ɔhonam” di dwuma wɔ akwan ahorow so. Ɛtɔ da a, ɛkyerɛ yɛn honam ankasa. (Rom. 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Ɛtɔ da nso a, ɛkyerɛ abusua a yefi mu. Ná Yesu fi “Dawid ase ɔhonam mu,” na na Paulo bu Yudafo no sɛ wɔyɛ “ne honam fam abusuafo.”​—Rom. 1:3; 9:3.
7 Nanso, nea Paulo kyerɛwee wɔ Romafo ti 7 no boa yɛn ma yɛte asɛmfua “ɔhonam” a ɔkaa ho asɛm wɔ Romafo 8:4-13 no ase. Ɔde “ɔhonam nneɛma” a wɔyɛe no bataa “akɔnnɔ bɔne” a na ‘ɛreyɛ adwuma wɔ wɔn akwaa mu’ no ho. (Rom. 7:5) Wei ma yehu “wɔn a wɔnam ɔhonam mu” a Paulo kae sɛ wɔde “wɔn adwene si ɔhonam mu nneɛma so” no. Ná ɔreka nnipa a wodi wɔn nkate akyi anaa wɔde wɔn adwene si nneɛma bɔne a ɛwɔ nnipa a yɛtɔ sin komam so no ho asɛm. Yɛreka paa a, wɔyɛ nnipa a wodi wɔn akɔnnɔ akyi. Ebetumi ayɛ nna ho akɔnnɔ anaa akɔnnɔ foforo.
8. Adɛn nti na na ɛfata sɛ wɔbɔ Kristofo a wɔasra wɔn no mpo kɔkɔ wɔ nantew a na wɔbɛnantew “ɔhonam mu” no ho?
8 Ebia wubebisa sɛ, adɛn nti na Paulo ka kyerɛɛ Kristofo a wɔasra wɔn no denneennen sɛ wɔnhwɛ yiye wɔ asiane a ɛwom sɛ wɔbɛnantew “ɔhonam mu” no ho? Ɛnnɛ, asiane a ɛte saa betumi ato Kristofo a wɔwɔ hɔ a Onyankopɔn agye wɔn atom sɛ ne nnamfo na obu wɔn sɛ treneefo no anaa? Awerɛhosɛm ne sɛ, Kristoni biara betumi afi ase anantew ɔhonam mu na wadi akɔnnɔ bɔne akyi. Ɛho nhwɛso bi ni. Paulo kyerɛwee sɛ anuanom bi a na wɔwɔ Roma yɛ nkoa “ma wɔn ankasa yafunu,” anaasɛ wɔn akɔnnɔ de wɔn ayɛ nkoa. Ebetumi aba sɛ na akɔnnɔ no yɛ nna ho akɔnnɔ, aduan ho akɔnnɔ, nsã anaa nneɛma foforo ho akɔnnɔ. Ná wɔn mu binom “daadaa wɔn a wɔn tirim fitaa” no. (Rom. 16:17, 18; Filip. 3:18, 19; Yuda 4, 8, 12) Kae nso sɛ, onua bi a na ɔwɔ Korinto ‘gyee ne papa yere’ ne no tenae kosii bere bi. (1 Kor. 5:1) Enti ntease wom sɛ Onyankopɔn nam Paulo so bɔɔ Kristofo kɔkɔ sɛ wɔnhwɛ na wɔamfa wɔn ‘adwene ansi honam nneɛma so.’​—Rom. 8:5, 6.
9. Kɔkɔbɔ a Paulo de mae wɔ Romafo 8:6 no, dɛn na ɛnkyerɛ?
9 Saa kɔkɔbɔ no ho da so hia nnɛ. Sɛ Kristoni bi asom Onyankopɔn mfe pii mpo a, obetumi afi ase de n’adwene asi honam nneɛma so. Ɛno nkyerɛ sɛ ɛwom ara na sɛ Kristoni bi dwinnwen aduan, adwuma, anigyede, anaa mpo ɔbarima ne ɔbea ntam dɔ ho a, na ɛkyerɛ sɛ wafi ase de n’adwene resi honam nneɛma so. Onyankopɔn somfo biara betumi adwinnwen nneɛma a ɛte saa ho. Yesu didii, na ɔmaa nkurɔfo aduan dii. Yesu hui sɛ ehia sɛ ogye n’ani. Paulo nso kyerɛwee sɛ, ɔbarima ne ɔbea nna yɛ ade a ɛho hia wɔ aware mu.
Nkɔmmɔ a wobɔ kyerɛ sɛ wode w’adwene asi honhom nneɛma so anaa honam nneɛma so? (Hwɛ nkyekyɛm 10, 11)
10. Sɛ Romafo 8:5, 6 ka ‘adwene a wɔde si biribi so’ a, ɛkyerɛ sɛn?
10 Bere a Paulo kaa “adwene a esi honam nneɛma so” ho asɛm no, dɛn na na ɔrekyerɛ? Hela asɛmfua a Paulo de dii dwuma no kyerɛ sɛ, “obi de n’adwene anaa ne koma besi biribi so, obesusuw biribi ho anaa ɔbɛfa ho adwene.” Wɔn a wɔnam ɔhonam mu no mmɔ mmɔden sɛ wobedi wɔn sintɔ so, na mmom ɛno titiriw na wɔma ɛkyerɛ wɔn nea wɔnyɛ wɔ wɔn asetena mu. Nhomanimfo bi kaa asɛmfua a wɔde dii dwuma wɔ Romafo 8:5 no ho asɛm sɛ: “Wɔde wɔn adwene si honam mu nneɛma so. Nea ɛkyerɛ ne sɛ, saa nneɛma no na wɔn ani gye ho kɛse, ɛho nkɔmmɔ na wɔbɔ bere nyinaa, ɛno ara na wɔyɛ, na wɔde hoahoa wɔn ho nso.”
11. Nneɛma bɛn na yebetumi adwinnwen ho bere a yɛrebisa yɛn ho sɛ, ‘Dɛn paa na ɛho hia me wɔ m’asetena mu?’
11 Ná ɛfata sɛ Kristofo a wɔwɔ Roma no susuw nea ɛho hia wɔn paa wɔ wɔn asetena mu ho. Ebetumi aba sɛ na “ɔhonam mu nneɛma” agye wɔn adwene, anaa ɛno na na wɔde wɔn adwene asi so? Yɛn nso, ehia sɛ yebisa yɛn ho asɛm koro no ara wɔ yɛn asetena mu. Nneɛma bɛn na ehia yɛn paa wɔ yɛn asetena mu, na dɛn na yɛtaa bɔ ho nkɔmmɔ? Dɛn paa na yedi akyi da biara da? Ebia ebinom behu sɛ, nea ehia wɔn paa ne sɛ wɔbɛka nsã ahorow pii ahwɛ, wobesiesie wɔn fie, wobenya ntade a aba so, wɔde wɔn sika bɛhyɛ nnwuma bi mu, wobetutu akwan akogye wɔn ani, ne nea ɛkeka ho. Saa nneɛma no nyɛ bɔne ankasa; ɛka nneɛma a nnipa yɛ no daa wɔ wɔn asetena mu no ho. Sɛ nhwɛso no, bere bi Yesu yɛɛ nsã, na Paulo nso ka kyerɛɛ Timoteo sɛ ɔnnom “bobesa kakra.” (1 Tim. 5:23; Yoh. 2:3-11) Nanso, nsã ho ‘nkɔmmɔ na na Yesu ne Paulo bɔ bere nyinaa’ anaa? ‘Nsã ara na na wɔnom, na na wɔde hoahoa wɔn ho’ anaa? Ɛno ne ade a na ɛda wɔn koma so, kyerɛ sɛ, ɛno na na ‘wɔbɔ ho nkɔmmɔ bere nyinaa’? Dabi. Yɛn nso ɛ? Dɛn paa na ɛho hia yɛn wɔ yɛn asetena mu?
12, 13. Adɛn nti na nneɛma a yɛde yɛn adwene si so no yɛ aniberesɛm paa?
12 Ehia paa sɛ yɛn mu biara pɛɛpɛɛ ne mu hwɛ. Adɛn ntia? Paulo kyerɛwee sɛ: “Adwene a esi honam nneɛma so yɛ owu.” (Rom. 8:6) Wei yɛ aniberesɛm efisɛ obi a ɔyɛ saa no bewu wɔ honhom fam nnɛ, na daakye nso wahwere ne nkwa. Ne nyinaa mu no, ɛnyɛ nea na Paulo reka ne sɛ, sɛ obi fi ase de ‘n’adwene si honam nneɛma so’ a, owu ara na obewu. Nnipa tumi sesa. Wo de, yɛnhwɛ ɔbarima guamanfo a odii “honam nneɛma,” anaa honam akɔnnɔ akyi a ɛma wotuu no fii Korinto asafo no mu no. Ná obetumi asesã, na ɔsesae nso. Ogyaee honam nneɛma akyi a na odi no, na ɔsan fii ase nantew ɔkwantrenee so bio.​—2 Kor. 2:6-8.
13 Sɛ saa nipa no tumi sesae a, ɛnde Kristoni a ɔwɔ hɔ nnɛ nso betumi asesa, ne titiriw, obi a onnii honam mu nneɛma akyi nkɔɔ akyiri te sɛ nea Korintoni barima no yɛe no. Nokwasɛm ne sɛ, ɛsɛ sɛ kɔkɔbɔ a Paulo de mae wɔ nea ebetumi ato obi a ɔde ‘n’adwene si honam nneɛma so’ no kanyan Kristofo ma wɔyɛ nsakrae biara a ehia sɛ wɔyɛ!
“ADWENE A ESI HONHOM NNEƐMA SO”
14, 15. (a) Sɛ obi ‘amfa n’adwene ansi honam nneɛma so’ a, ade foforo bɛn na obetumi de n’adwene asi so? (b) Sɛ wɔka sɛ yɛmfa yɛn ‘adwene nsi honhom nneɛma so’ a, dɛn na ɛnkyerɛ?
14 Bere a ɔsomafo no bɔɔ yɛn kɔkɔ sɛ ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn ‘adwene si honam nneɛma so’ no, ɔmaa yɛn awerɛhyem sɛ: “Adwene a esi honhom nneɛma so yɛ nkwa ne asomdwoe.” Nkwa ne asomdwoe​—akatua biara nni hɔ a ɛne wei sɛ! Yɛbɛyɛ dɛn anya saa akatua no bi?
15 Sɛ wɔka sɛ yɛmfa yɛn ‘adwene nsi honhom nneɛma so’ a, ɛnkyerɛ sɛ yenyi yɛn adwene mfi biribi foforo biara so. Ɛnyɛ nea ɛkyerɛ ne sɛ Bible nkutoo na ɛsɛ sɛ obi dwen ho na ɔka ho asɛm. Saa ara nso na ɛnkyerɛ sɛ Onyankopɔn ho dɔ ne daakye ho anidaso a ɔwɔ nkutoo na ɛsɛ sɛ odwen ho na ɔka ho asɛm. Momma yɛnkae sɛ, na Paulo ne afoforo a wɔtenaa ase wɔ asomafo no bere so a na wɔyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani no yɛ nneɛma a nnipa yɛ no daa no bi. Wodidi nomee. Wɔn mu pii waree woo mma, na wɔyɛɛ adwuma de hwɛɛ wɔn ho.​—Mar. 6:3; 1 Tes. 2:9.
16. Ɛwom sɛ Paulo yɛɛ nneɛma a nnipa yɛ no daa no bi de, nanso dɛn na ɔde n’adwene sii so kɛse?
16 Ɛwom sɛ Paulo yɛɛ nneɛma a nnipa yɛ no daa no bi de, nanso saa nkurɔfo a na wɔsom Onyankopɔn no amma nneɛma a wɔyɛ no daa no ammɛyɛ ade titiriw a wɔyɛ wɔ wɔn asetena mu. Bere a Kyerɛwnsɛm no kae sɛ Paulo yɛ adwuma sɛ ntamadanyɛfo akyi no, ɛkyerɛɛ adwuma titiriw a na ɔyɛ: Nea ɔde n’adwene sii so paa ne asɛmpaka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma a na Kristofo yɛ no. (Kenkan Asomafo Nnwuma 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Asɛnka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no na Paulo hyɛɛ ne nuanom mmarima ne mmea a wɔwɔ Roma no nkuran sɛ wɔnyɛ. Nokwasɛm ne sɛ, Paulo de n’adwene sii honhom fam nneɛma so. Ná ɛsɛ sɛ anuanom a wɔwɔ Roma asafo no mu suasua no, na saa ara na ɛsɛ sɛ yɛn nso yesuasua no.​—Rom. 15:15, 16.
17. Sɛ yɛde yɛn ‘adwene si honhom nneɛma so’ a, yɛn asetena bɛyɛ sɛn?
17 Sɛ yɛkɔ so de yɛn adwene si honhom nneɛma so a, dɛn na yebenya? Romafo 8:6 ka no pefee sɛ: “Adwene a esi honhom nneɛma so yɛ nkwa ne asomdwoe.” Ɛno hwehwɛ sɛ yɛma honhom kronkron kanyan yɛn adwene ma ɛne Onyankopɔn nsusuwii hyia. Yebetumi anya awerɛhyem sɛ, sɛ yɛde yɛn adwene si “honhom nneɛma” so a, ɛnnɛ mpo yebenya akomatɔyam wɔ yɛn asetena mu. Na daakye nso, yebenya daa nkwa wɔ soro anaa asase so.
18. Sɛ ‘yɛde yɛn adwene si honhom nneɛma so’ a, ɔkwan bɛn so na yebenya asomdwoe?
18 Momma yɛnhwɛ asɛm a ɛma yenya awerɛhyem a ɛne sɛ, “adwene a esi honhom nneɛma so yɛ . . . asomdwoe” no. Nnipa pii pere hwehwɛ asomdwoe. Bere a ebinom repere rehwehwɛ abotɔyam no, yɛn de yɛwɔ bi dedaw. Nea ɛma yenya abotɔyam ne sɛ, yɛbɔ mmɔden sɛ yɛne yɛn abusuafo ne asafo no mufo bɛtena asomdwoe mu. Yenim sɛ yɛn ankasa ne yɛn nuanom mmarima ne mmea nyinaa tɔ sin. Wei nti, ɛwom ara a nsɛmnsɛm betumi asɔre wɔ yɛn ntam. Ɛba saa a, wɔakyerɛ yɛn sɛ yenni Yesu afotu yi akyi: ‘Wo ne wo nua no nkosiesie mo ntam.’ (Mat. 5:24) Sɛ yɛkae sɛ onua anaa onuawa a yɛne no anya asɛm no nso yɛ “Onyankopɔn a ɔma asomdwoe” no somfo a, ɛnde ɛnsɛ sɛ ɛyɛ den koraa sɛ yɛne no besiesie yɛn ntam.​—Rom. 15:33; 16:20.
19. Sɛ yɛde yɛn adwene si honhom nneɛma so a, asomdwoe a ɛkyɛn so bɛn na yenya?
19 Asomdwoe foforo bi nso wɔ hɔ a, ɛno de, ɛso bi nni. Sɛ yɛde yɛn ‘adwene si honhom nneɛma so’ a, ɛbɛma asomdwoe aba yɛne yɛn Bɔfo no ntam. Yesaia kyerɛw asɛm bi a na ɛfa ne beresofo ho, nanso saa asɛm no anya mmamu kɛse mpo nnɛ. Ɔkae sɛ: “Nea ne koma si pi no, [wo Yehowa,] wode asomdwoe bɛbɔ ne ho ban daa, efisɛ ɔde ne ho ato wo so.”​—Yes. 26:3; kenkan Romafo 5:1.
20. Adɛn nti na w’ani sɔ afotu a ɛwɔ Romafo ti 8 no?
20 Enti sɛ wɔde honhom asra yɛn oo, sɛ yɛn ani da so sɛ yɛbɛtena ase daa wɔ paradise asase so oo, ɛsɛ sɛ yɛn ani sɔ asɛm a wɔnam honhom so kyerɛwee wɔ Romafo ti 8 no. Nkuranhyɛ a wɔde ama yɛn sɛ ɛnsɛ sɛ yɛma “honam nneɛma” yɛ ade a ɛho hia paa wɔ yɛn asetena mu no, yɛn ani sɔ paa! Yɛabehu sɛ, nyansa wom paa sɛ yɛbɛbɔ yɛn bra ma ɛne awerɛhyem a Onyankopɔn de ama yɛn no ahyia. Ɛne sɛ: “Adwene a esi honhom nneɛma so yɛ nkwa ne asomdwoe.” Sɛ yɛyɛ saa a, akatua a yebenya no bɛtena hɔ daa, efisɛ Paulo kyerɛwee sɛ: “Bɔne akatua ne owu, na akyɛde a Onyankopɔn de ma ne daa nkwa a ɛnam yɛn Awurade Kristo Yesu so.”​—Rom. 6:23.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 2016
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 2016